Fandrobana volabe 36 tapitrisa Ar: tratra ireo roa lahy naman’ilay zandary maty voatifitry ny polisy | NewsMada
Ankoatra ny lehilahy iray hafa, voasambotry ny polisin’ny borigady miady amin’ny herisetra (brigade criminelle), afakomaly alina ihany, ireo roa lahy, naman’ilay zandary maty voatifitry ny polisy, teny akaikin’ny Fasan’ny Karana. Voalaza fa polisy efa naato amin’ny asany ny iray, ary izao tafiditra amin’ny fandrobana vola 36 tapitrisa Ar izao.
Tra-tehaky ny polisy ireo roa lahy hafa ahina ho mpiray tendro amin’ ilay zandary sy ny namany, tompon’antoka tamin’ny fanafihana teny amin’ny faritra Anosizato. « Fantatra fa polisy efa naato amin’ny asany ny iray noho ny fandraisany anjara tamin’ny fanafihana tombin-tsolika iray eo ampitan’ny HJRA, tamin’ny fotoan’androny », hoy ny fanazavan’ny seraseran’ny Polisim-pirenena. Tratra tamin’izany koa ny basy poleta roa nisy bala miisa enina sy antsy ary vola antapitrisany maro. Fitaovana tao anaty kitapon’izy roa lahy tao anatina fiara marika Peugeot 309 nentiny ireo. Efa voasambotra koa ny naman’ilay zandary maty voatifitra.
Zandary nisandoka ho polisy
Raha tsiahivina ny tranga niseho, lavon’ny balan’ny polisy ny zandary iray niasa tao amin’ny Toby Ratsimandarava, ny alarobia maraina teo tokony tamin’ny 5 ora. Avy nanao fanafihana mitam-piadiana teny akaikin’Anosizato izy sy ny namany tamin’io. Nanao fanamiana polisy ireo lehilahy roa ka nisakana fiara Crafter iray. « Nitaky ny hisavana ny taratasy momba ny fiara ireo roa lahy ary nisava ny tao anaty fiara », hoy ny Polisim-pirenena. Nihevitra ireo niharam-boina fa mpitandro filaminana nanao ny asany izy ireo ka namela malalaka nisava ny fiara sy nanolotra ny taratasin’ny fiara. Nosintomin’ny iray amin’izy roa lahy ny kitapo nisy ny vola nitentina 36 tapitrisa Ar, nipetraka teo akaikin’ny mpamily. Nanambana basy ireo tompona fiara ireo jioalahy ary nilefa nandositra tamin’ny moto scooter avy eo.
Nanao antso vonjy amin’ny polisy ireo voatafika ka nanenjika ilay moto nizotra ho any Ankadimbahoaka. Vokatry ny fandehanana mafy, nianjera teo Fasan’ny Karana ilay moto. Vokany, nitsoaka ny iray amin’ireo roa lahy fa ny iray kosa, namoaka basy ka ary nikasa hitifitra ireo polisy efa nanatona. Voatery nitifitra azy teo amin’ny sandriny, araka izany, ireo polisy. Naratra ralehilahy ka nentina teny amin’ny hopitaly, saingy namoy ny ainy teny an-dalana. Hita tamin’ny fisavana ilay moto nentin’ireo olon-dratsy kosa ny « carte professionnelle » maha zandary an’ilay voatifitra. Teo koa ny taratasy maro samihafa mikasika azy. Nogiazana avokoa ireo fitaovana hita niaraka amin’ny basy sy ny moto.
Araka izany, andrasana ny ho tohin’ity raharaha mahavoasaringotra mpitandro filaminana ity.